Yaa Ka Dambeeyay Xasuuqa Takhaatiirta? - Yeese dan ugu jirtaa? | KEYDMEDIA ONLINE
Yaa Ka Dambeeyay Xasuuqa Takhaatiirta? - Yeese dan ugu jirtaa?
Keydmedia Online - Yee dan ugu jirtaa Dilka Waxgaradka iyo Wariyaalka Soomaaliyeed? - Tobonkaan Sano dambe Koofurta Soomaaliya waxaa ku socda Qorshayaal kahor imaanaya Xuquuqda Insaanka, Horumarka Dalka iyo Nabad ka aslaxda Soomaaliya.
Durbadiiba waxaa lala soo boodaa iney Falalkaas waxashtinimada ah (Dilalkaas / Qaraxyadaas) oo Bini'aadniga lidka ku ah ka dambeeyaan KOOXDA SHABAAB! Dowladd baarta ma jirto, Saxaafadd dabagashanah ma jirto. Maalmo kadib Dhacdadii waa la iska ilowbay!
Waxa Shalay lagu laayay Duleedka Magaalada Muqdisho Afar Takhaatiir ah oo iskugu jiray Saddex Suuriyaan ah iyo Hal Soomaali ah. Sidoo kale Xasuuqaas waxaa ku Geeriyooday Laba Nin oo ilaaladii Takhaatiirta ka mid ah.
Shan Bilood kahor ayay aheyd markii Weerar gaadmo ah lagu dilay Allahu u naxariistee Dr. Cismaan C/raxman Fiqi oo uu dhalay Takhtarka Shalay la weeraray.
Labada Weerarba way beeniyeen Argagixisada Al-Shabaab oo inta badan lagu tuhmo Dilalka gaadmada ah, khibradda aan u leenahay Al-Shabaabna waxay na tusinaysaa inay ka run sheegayaan beenintooda. Sababtoo ah inta badan Al-Shabaab ma beeniyaan ficiladooda. Waxa kaloo aan Al-Shabaab horay loogu aqoon Weerar noocaan oo kale ah oo ay adeegsadaan Hubka darandooriga u dhaca, waxayna weeraradooda oo dhan ku fulin jireen Miinooyinka Qarxa iyo bistooladaha yar yar. Waxa intaas wehlisa inaysan horay iyo gadaalba u jirin wax dakano ah oo ka dhexeeyay Dr. Fiqi iyo Al-Shabaab wuxuuna Dr. Fiqi ka shaqeynayay isbitaalkiisa xiligii ay Al-Shabaab Maamuli jireen Ceelasha Biyaha iyo kadiba.
Inta aanaan u galin cidda uu Tuhunku ku meeraysanayo, waxan iftiimin lahaa taag-darida iyo wax-qabad la'aanta Dowladda Soomaaliya, oo aan iyadu wali u soo jeesan soona bandhigin qorsha Wadanka looga sifaynayo Kooxaha iyo Hubka sharci darada ah. Waxqabadka iyo Howsha Madaxda dowladuna waxay noqotay Lacag aruursi iyo walwal ay ka walwalsan yihiin halka ay ku noolaan doonaan iyo Dhaqaalaha ay ku noolaan doonaan marka ay xilka ka dagaan.